'श्रीमान'ले महासचिव ताकेपछि बार निर्वाचनमा अन्तर्घात !!
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनको २०७५ फागुन १६ मा भएको निर्वाचनमा प्रगतिशील पेशागत तथा समावेशी समूहले २५ सदस्यीय कार्यसमितिमा अध्यक्षसहित २२ सिटमा बिजय हासिल गरेको छ । महासचिवसहित एक उपाध्यक्ष र एक सदस्य बृहत लोकतान्त्रिक समूहले जितेको छ ।
प्रगतिशील समूहबाट महासचिवका उम्मेदवार सुरेन्द्र बहादुर थापामाथि पूर्वएमालेनिकट कानून ब्यवसायीले नै अन्तर्घात गरी हराइदिएका छन् । जसको नेतृत्व ३ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले नै गरेको आरोप छ । उच्च अदालत बार एशोसिएसन पाटनबाट सा“ढे ४ सयभन्दा बढी एमाले निकट कानून ब्यवसायीहरुले लोकतान्त्रिकका महाचिवका उम्मेदवार लीलामणि पौडेललाई क्रस गरेका थिए ।
अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिवमा पौडेललाई उच्च अदालत बारका वकिलहरुले मतदान गरेका थिए । त्यसो त अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईमाथि पनि थापालाई अन्तर्घात गरेर हराएको आरोप छ । गुट निरपेक्ष भद्र स्वभावका थापा सर्वोच्च अदालत बारको सदस्य र सचिव भई विवादरहित रुपमा काम गरेका कानून ब्यवसायी हुन् । कानून ब्यवसायीबीचमा उनी सबैप्रति समभाव राख्ने भनेर चिनिन्छन् । तर, पनि उनलाई अन्तर्घात गरी हराइएको छ ।
ईश्वरी भट्टराई महासचिव हुने दाउमा थिए । त्यसका लागि उनी निकै लागे । यसअघि उनकी श्रीमती बिष्णुमाया भूसाललाई बारको सदस्य बनाइसकेको र यो पटक पनि श्रीमानलाई महासचिव चाहिने भन्ने प्रश्न उठेपछि साविक एमालेको कानून विभाग प्रमुख रघु पन्तले सुरेन्द्र बहादुर थापालाई महासचिवको उम्मेदवार बनाएका थिए ।
सुरेन्द्र बहादुर थापालाई महासचिवको उम्मेदवार बनाउनासाथ भट्टराईहरुले पन्तलाई देखाइदिने भनी डीएलएका पौडेललाई मत दिन भित्रभित्रै आफ्नो पक्षकालाई सर्कुलर गरेका थिए । जुन निर्वाचनको परिणामपछि देखिएको छ । बारमा अध्यक्षसहित दुई तिहाई भन्दा बढी प्रगतिशीलले जिते पनि महासचिवमा हार्नुपरेको छ ।
सत्तारुढ दल बाम निकट प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूहका अध्यक्षका उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठ विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी लोकतान्त्रिकका सुनीलकुमार पोखरेल पराजित भए । श्रेष्ठले चार हजार २२ मत ल्याए भने पोखरेलले तीन हजार आठ सय ७३ मत प्राप्त गरे ।
नेपाल बारको २५ सदस्यीय कार्यसमितिमा २२ जना प्रगतिशील समूहबाट उम्मेदवार बनेका विजयी भए । बारमा सत्तारूढ नेकपा निकट प्रगतिशील समूहबाट एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सात जना उपाध्यक्ष र १३ केन्द्रीय सदस्य समेत निर्वाचित भएका छन् ।
सानो जनमत संग्रहको रुपमा हेरिएको नेपाल बार एशोसियसन निर्वाचनको यो जितसंगै कार्यसमितिमा प्रगतिशील समूहलाई स्पष्ट दुई तिहाइ जित हात परेको छ । प्रदेश–५ को उपाध्यक्षमा लोकतान्त्रिक समूहबाट उम्मेदवार बनेका सुनीलकुमार श्रेष्ठ तीन हजार नौ सय ८६ मत र मधेसी/मुस्लिम खुला सदस्यमा मनोजकुमार चौधरी तीन हजार नौ सय ३० मत ल्याएर विजयी भए ।
महासचिवमा सुरेन्द्र कसरी हारे ?
बारको महासचिवमा लोकतान्त्रिक समूहका लीलामणि पौडेल विजयी हुँदा प्रगतिशील समूहका सुरेन्द्र बहादुर थापा पराजित भए । पौडेलले थापालाई चार सय ७७ मत अन्तरले पराजित गरे । पौडेलले चार हजार एक सय ७८ ल्याउँदा थापाले तीन हजार सात सय एक मत मात्र प्राप्त गरे ।
सुरेन्द्र बारका लागि नयाँ अनुहार थिए । उनी बारको केन्द्रीय सदस्य पनि थिएनन् । पूर्व नेकपा एमाले निकट रहेका थापालाई नेकपाका नेता रघुजी पन्तले जबर्जस्ती पेलेर टिकट दिलाएका त हुन् तर बारमा अन्तरघात भयो र रघुजी पन्तको हिसावकितावले हावा खायो ।
थापाले महासचिवमा जितेको खण्डमा नेपाल बारको तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनमा उनी अध्यक्ष पदको दावी गर्छन् भन्ने सर्कुलर भित्रभित्रै भुसको आगो जसरी फैलाइयो । अतरघातको यो प्रपञ्च थापाले बुझ्नै सकेनन् जसले गर्दा थापालाई काठमाडौकै मतदाताले धोका दिए । उनलाई हराउन बुनिएको यस्तो प्रपञ्च अहिले वकिलहरुबीच व्यापक चर्चामा छ ।
महासचिवमा थापालाई हराउन पूर्व माओवादीहरु र अध्यक्ष पदका उम्मेदवार चण्डेश्वर नै स्वयम् कम्मर कसेर लागेको आरोप लागेको छ । लोकतान्त्रिक समूहका एक वकिलका अनुसार महासचिवमा सुरेन्द्र बहादुर थापा हार्नु पूर्व एमाले र माओवादी वकिलहरुबीचको अन्तर्घात नै मुख्य कारण हो ।
नेपाल बार निर्वाचनमा १० हजार एक सय ४१ मतदाता थिए । जसमध्ये आठ हजार तीन सय २८ जनाले मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए ।